Saturday July 09, 2016 - 17:42:14 in Muuqaallo by Super Admin
Nasiib wanaag, xabadihii cidna kumay dhicin, wax dhibaata ahna may geysan. Ubadkii
Wasiirka iyo laba hablood oo kale aya wakhtigaas guriga ku sugna. Waalidiintooduna guriga way ka maqnaayeen. Hase ahaatee, isla markii weerarku dhaceyba way kusoo laabteen guriga. Waxaanay la kulmeen caruurtii oo fajacsan oo cabsi weynina hayso.
Dhacdadani waxay kaloo walbahaar , fejiciso iyo looma-qaataan ku riday bulshada Hargeysa ku nool. Waxa goobaha bulshadu iskugu timaado laga hadal-hayey ujeedada weerarkii dhacay iyo ciddii ka dambeysay. Waxay bulshadu la yaabantahay sababta guriga Wasiirka loo weeraray, isagoo ah wasiir ila hadda ka nadiif ah dhagar siyaasadeed ama mid shakhsiba; inkasta oo marmarka qaarkood uu ku fiican yahay guulwadeynta afka iyo ta qoraalkaba, taas oo uu kala mid yahay saaxiibadisa kale ee lagu tilmaamo inay ku xejisanayaan, kalsooni daro naftooda ka qaban awgeed, mansabkooda. Waa dhaqan xumo maamul oo ugub ku ah Somaliland oo la kowsaday xukuumada manta joogta.
Wasiir Keysar waa mudanka masuuliyiinta deegaankiisa ugu jiray xukuumada. Waxaana
la odhan kara inuu yahay masuulka keliya ee ka-damqada duruufaha wax- qabad la’aaneed ee dhinaca xukuumada ee ku gadaaman deegaanka uu ka soo jeedo.
Nasiib darada haysata se waxay tahay dhawaaqiisa oo meel fog gaadhin,sababta oo ah mansabka uu ku fadhiyo ( wasiir ku-xigeen) oo awood badan lahayn.
Weerarkan dhacay ugub kuma aha magaalada Hargeysa, balse wuxuu bilaabmay
sanadkii labaad ee xukuumada hada talada haysa. Markaaso dhacdooyin dhowr ah
oo kala dambeeyey kasoo if-baxeen caasimada HARGEYSA iyo gobolada qaarkood.
Waxa ka mid ahaa weerarkii bistoolada ee lagu soo qaaday xildhibaan ku jira Golaha
Wakiilada, Mudane Qabile, oo si firfircoon u dhaliili jiray Xukuumada. Weerarkaaso
buuq iyo sawaxan balaadhan geliyey bulshada, iyagoo Isla-markaasna ka- gilgilanaya ficilkaas foosha xumaa ee lagula kacay xildhibaanka. Waxa ka dambeeyey weerarkii lala
beegsaday haldoor Barkhad Batuun, markii uu iska- casilay xilkii Lataliyaha Madaxweynaha ee beelaha la hayb soco,Isla markaasna badheedhihisa ka dhiibtay saluuga uu ka qabay wax- qabad la’aanta xukuumada ee ku aadan tabashooyinka beelahaas uu kasoo jeedo. Waxay kooxda soo duushay burburisay baabuurkiisii .Waxa kuwaas ku xigay weerarkii hubeysna ee lala beegsaday guriga aqoonyahan, Fuaad Cabdisalaam oo ka mid ahaa xubnaha ugu firfircoon ee Golaha Aqoonyahanka iyo Dhalinyarada Qalinka Dauud, haddana ah Gudoomiyahooda. Waxa gurigiisa lagu graacay rasaas badan oo aan ilaa hadda ujeedadeeda laga laha aan la garaneyn.
Dhamaan dadkaas kor ku xusani iyo kuwii kaleba, waxaa la sheegaya, inay tuhun qabeen
cidii ka dambeysay ficiladaas, Hase ahaatee aan ila maanta la ogeyn natiijadii ka soo baxday baadhitaankii muwaadiniintaasu ka dalbadeen ha’yadaha amniga.
Waxa xusid mudan, in muddo laga nastay weeraradaas argagaxa lahaa ee lagu baqdin gelin jiray muwaadiniin la bartilmaansaday ,oo u badna kuwa aad u dhaliila maamul xumada iyo wax-qabadka xukuumada. Balse, waatan hadda la soo rogaal celiyey.Eebe ha inaga badbaadiyee. Waxay bulshadu sheegta in kooxdaaas laga soo abaabulo meelo gaar ah, madaxna uu u yahay qof loo yaqaano KUDHUFTE, amase "THE HITMAN.” Dadkii dhibaatada loo geestay tuhunkoodii weli waa jira oo wuu nool-yahay, balse cadeemihii ay u baahnaayeen bay la’yihiin. Hay’adii baadhistuna weli waa laga dhursugaya.
Waxa kaloo hadda soo ifbaxay in Wasiir Keysar, sidii muwaadiniintii ka horeeyey ee
tacadiga tirsanayey tilmaameen, uu isna ha’yadaha amaanka u sheegay qofka uu ku tuhunsanyahay inuu weerarka u soo maleegay. Wuxuuna ka dalbaday inay arrintan, si
qotadheer u baadhaan natiijo wax-ku-ool ahna ka soo saaraan.
Waxa la rajeynaya in baadhitaanku hadda soo afjari doono ficilkan sharciyada ka baxsan ee dhowrka sanadood soo jiitamayey, xabsigan loo taxaabi doona KUDHUFTAHA iyo
kooxdiisaba . Bal aynu ka dhursugno wuxuu ku dambeeyo baadhitaankan xiisaha
badan u leh bulshada Somaliland.